LISITRY NY ALIKA MIFANGARO AO CHIHUAHUA - ALIKA
Lisitry ny alika mifangaro ao Chihuahua
Roscoe the Chihuahua / Miniature Pinscher mix (Chipin) amin'ny 2 taona
lab saint bernard afangaro alika kely
Chihuahua x American Bulldog = American Bullhuahua
Chihuahua x Amerikanina Eskimo = Eskimo Chi
Chihuahua x Mpiandry Aostralianina = Aussie-Chi
Chihuahua x Basenji mix = Anglisy
Chihuahua x Bichon Frize = Chi-Chon
Chihuahua x Bolognese = Bolo-chi
Chihuahua x Brussels Griffon = Brissel Chiffon
Chihuahua x Sinoa Voadona = Iza no
Chihuahua x Dalmatian = Chimation
Chihuahua x French Bulldog = Bullhuahua frantsay
Chihuahua x Hipedia = Cheenese
Chihuahua x Italiana Greyhound = Greyhuahua italianina
Chihuahua x Chin Japoney = Chin-wa
Chihuahua x Lhasa Apso = Momba an'i Apso
Chihuahua x Miniature Pinscher = Minchi / Chipin
Chihuahua x Pekingese = takolaka
Chihuahua x Poodle = Iza Poo
Chihuahua x Pug = alefa miadana
Chihuahua x Schipperke mix = Skipper-Chi
Chihuahua x Smooth Fox Terrier = Chisoxy malefaka
Chihuahua x West Highland White Terrier = zavatra
Chihuahua x Wired Fox Terrier = Wire Chiwoxy
Manantena ny Chihuahua / Pug mix (Chug) sahabo ho 1 taona eo ho eo— 'Ny fanantenana dia navotana tamin'ny SPCA raha naseho nandritra ny' andro fitsidihana 'tao amin'ny PetCo iray teo an-toerana. Tena be fitiavana izy, tia ny eo am-pofoanao na akaiky anao. Mampiala-voly izy: tiany ny maka sombin-kibble amin'ny loviany, manototra ary 'manenjika' azy alohan'ny hamelezana azy sy hihinanana azy. Avy eo hifidy ampahany hafa izy ary hitohy ny hetsika hatsikana! :) Izy koa dia mampiseho izay nantsoinay hoe ' zoomies ': mihazakazaka haingana sy miverina amin'ny alàlan'ny fantsom-pako apetaka amin'ny fanaka, ny lela mihantona toa misy fipoahana! Raha fintinina, azo inoana fa ilay sakaiza kaninina tiako indrindra izay nahafaly ahy nizara ny fiainako! Ampidiriko ao ny 'pose olona!'
Kathulu the Chihuahua / Shih Tzu mix (ShiChi) sahabo ho 1 taona eo ho eo— 'Volom-borona matanjaka be izy. Malala-tanana sy feno hery foana izy. Tiany ny miara-mikoty amiko raha vantany vao tonga any an-trano aho. Fitiavana be dia be izy ka tsy ho fantatro izay hatao raha tsy alikako izy. Rehefa nandeha nijery ireo alikakely izay amidy aho dia izy irery no tsy nihazakazaka na taiza na taiza niafina. Nipetraka teo am-pandriana alika fotsiny izy ireo, ary nijery ahy. Raiki-pitia teo noho eo aho. Manana orona volontany izy ary maso manga . Raha mihaona aminy ianao dia tsy mahavoky azy. '
Nico the Chihuahua / Jack Russell Terrier mix (Jack Chi) teo amin'ny 19 volana teo ho eo— 'Namako ny sariny ny namako, mila trano izy nefa niverina tany Texas ihany. Izahay sy ny bf dia nandamina ny hanidinana azy tany Chicago. 6 herinandro izy. Mandrosoa haingana amin'ny 19 volana. FITIAVANA isika ... tsy afaka an-tsaina ny fiainana raha tsy misy azy. I Nico no alika tsara indrindra hatramin'izay. Tena be fiaraha-monina izy, te hilalao amin'ny alika rehetra, na lehibe na kely. Tiany ihany koa ny mijanona ao an-trano fotsiny ary miala sasatra ary mijery TV miaraka aminay. Tiany ny mi-cuddle ary amin'ny alina mila akaiky anao izy. Tsy saro-kenatra, mahery setra na matahotra toa ny ankamaroan'ny Chihuahuas izy. Tsy lazaina intsony fa izy no kely indrindra. Manana tanjaka an-taonina izy ary vonona foana amin'ny fotoana rehetra. Nico ilay lolo sosialy !!! Oh ary tiany ny lanezy !!!! '
Phoebe the Chihuahua / Yorkie mix (Chorkie) amin'ny 4 taona— 'Ity i Phoebe, Chorkie 4 taona. Ity no fitsangatsanganana voalohany nataony teny amoron-dranomasina ary tena tiany izany! Manana olana izy fanahiana , fa izao kosa izy nanomboka hydrotherapy (notazonina tao anaty rano ka voatery nilomano nandritra ny 15 minitra tsy nijanona) dia nesorina daholo izany angovo fanampiny izany, ary niadana tsikelikely ny fitaintainany, nefa azo antoka fa nihatsara. '
Alika Purebred mifangaro amin'ny ...
Fampahalalana sy sary Chihuahua
Fa maninona no sarotra ny fampiofanana ny karazana kilalao?
Lazao ny Chihuahua
Sokajy fitadiavana alika alika
Afangaroy ny fampahalalana momba ny alika miteraka
Lisitry ny alika mifangaro
alika vavy 2 ve afaka mifanaraka
Cocker spaniel alika karazany Info
sarin'ny alika pyrenees lehibe